မြန်မာရူပီးငွေ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာရူပီးငွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၈၅၂ နှင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်များအကြား (၁၉၄၃-၁၉၄၅ မှလွဲ၍) တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ငွေကြေးဖြစ်သည်။
၄ ၁၉၄၂-၄၄ ခုနှစ်အတွင်း ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ရူပီးငွေများ
ဗြိတိသျှတို့ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်အပြီးတွင် အိန္ဒိယရူပီးငွေ ကို ကျပ်ငွေ ဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ အိန္ဒိယအစိုးရသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသည့် ငွေစက္ကူများပုံစံအတိုင်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ ရန်ကုန်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၂၇ ခုနှစ်များတွင် အိန္ဒိယငွေစက္ကူများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် သီးခြားကိုလိုနီဖြစ်လာသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည့် ငွေစက္ကူများကို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်တို့ ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ ရူပီးငွေအသစ်ကို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ယင်းရူပီးငွေကို ငွေစက္ကူအနေဖြင့်သာ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ထိုရူပီးငွေကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ငွေစက္ကူများကို တရားမဝင်အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ကာ အိန္ဒိယရူပီးငွေကို ပြန်လည်သုံးစွဲခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဒင်္ဂါးပြားနှင့် ငွေစက္ကူများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ရူပီးငွေကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ တစ်ရူပီးလျှင် ၁၆ ပဲ နှင့်၊ ၁ ပဲလျှင် ၄ ပြား နှင့်ညီမျှသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ရူပီးငွေအစား ကျပ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ၂ ပြား၊ ၁ ပဲ၊ ၂ ပဲ၊ ၄ ပဲနှင့် ၈ ပြားတန် ဒင်္ဂါးများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည် အိန္ဒိယ ½၊ ၁ နှင့် ၂ အန်နာ နှင့်၊ ¼ နှင့် ½ ရူပီးများနှင့် ပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ ဖွဲ့စည်းပုံခြင်း တူညီကြသည်။
၁၈၉၇ နှင့် ၁၉၂၂ ခုနှစ်များအကြားတွင် ၅၊ ၁၀ နှင့် ၁၀၀ တန် ရူပီးငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုငွေစက္ကုများမှာ အိန္ဒိယငွေစက္ကူများအတိုင်းဖြစ်ကာ ရေးသားထားသည့် ဘာသာစကားသာလျှင် ကွဲပြားသည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အစိုးရမှ ၁၊ ၅ နှင့် ၁၀ ဆင့်၊ ¼၊ ½၊ ၁၊ ၅၊ ၁၀ နှင့် ၁၀၀ တန် ရူပီးငွေများကို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ယင်းတို့ကို ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ၁၊ ၅၊ ၁၀ နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန်များဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ကျပ်ငွေများအစား ၁၊ ၅၊ ၁၀ နှင့် ၁၀၀ တန်ရူပီးများ ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲခဲ့ပြန်သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာငွေကြေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ငွေစက္ကူရိုက်နှပ်ခြင်းကို လွှဲပြောင်းရယူကာ ၁၊ ၅၊ ၁၀ နှင့် ၁၀၀ တန်ရူပီးငွေများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် အစိုးရမှ အလားတူ ငွေကြေးများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်မှ ရူပီးငွေကြေးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၄၂-၄၄ ခုနှစ်အတွင်း ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ရူပီးငွေများပြင်ဆင်
၁၉၄၂-၄၄ ခုနှစ်အတွင်း ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ရူပီးငွေများ
၁၉၄၂ BA–BP, B/AA–B/EX
၁၉၄၂ BA–BZ, B/AB–B/BX
၁၉၄၂ BA–BZ, B/AA–B/AR
၁၉၄၂ BA–BD အာနန္ဒာဘုရား၊ ပုဂံ
၁၉၄၂-၄၄ BA–BB အာနန္ဒာဘုရား၊ ပုဂံ
၁၉၄၂-၄၄ BA အာနန္ဒာဘုရား၊ ပုဂံ
၁၉၄၄ BA အာနန္ဒာဘုရား၊ ပုဂံ
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Cuhaj 2010, pp. 886–88.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာရူပီးငွေ&oldid=250118" မှ ရယူရန်
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၅၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၅၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။